Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Amazon | Safarka Absolut
Haddii aad jeceshahay inaad ku raaxeysato caloosha marka aad aado waddan kale, markaa hubaal waxaad jeclaan doontaa inaad ogaato waxa suxuunta ama cuntooyinka ay yihiin kuwa ugu caansan ama caadiga ah ee goobta. Maanta waxaan rabaa inaan kaala hadlo suxuunta caadiga ah ee gobolka Amazon, Meesha sida la filayo, cuntada ay dadkeedu cunaan lagu kariyo kuleylka oo had iyo jeer gacanta lagu hayo wax soo saarka caadiga ah ee gobolkan.
Gobolka Amazon wuxuu degaa bariga iyo qayb kamid ah koonfurta dalka, sidaa darteed aad buu u ballaadhan yahay. Waxaa ku jira wax aan ka yarayn waaxyaha Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Caqueta, Putumayo, Guainia, Guaviare, Vaupes iyo Amazonas. Gobolkan oo dhan oo ay ka buuxaan bannaano iyo wabiyaal gastronomy-ka ugu xoogga badan waxaa lagu daraa maaddooyin badan oo kala duwan oo sidoo kale ka imanaya soohdimaha Brazil iyo Peru, Taasi waa sababta aad u heli karto cuntooyin badan oo kala duwan, mid gaar ah iyo waliba mid aad u caadi ah.
1 Cuntada caadiga ah ee gobolka Amazon
1.1 Juane Peruvian ah
1.2 Ceviche, mid ka mid ah suxuunta caadiga ah ee gobolka Amazon
1.3 Suri palma grubs, cuntada caadiga ah ee gobolka Amazon
1.4 Hilib dubista reer Brazil
1.5 Kalluunka Gamitana
2 Cuntada ugu caansan
3 Hilibka ciyaarta
Cuntada caadiga ah ee gobolka Amazon
Juane Peruvian ah
Peruvian Amazon waxaad ka heli kartaa saxanka juanes ee lagu iibiyo suuqyada ama alaab-qeybiyeyaasha maxalliga ah. Waxay isugu jirtaa bariis iyo hilib - badanaa digaag - iyo geedo kala duwan oo ku duuban caleemo muus.. Tani waa mid ka mid ah cuntooyinka ay ugu jecel yihiin dadka ku nool dhulalkaas iyo dalxiisayaasha go'aansada inay aadaan oo ay tijaabiyaan saxankan caadiga ah.
Ceviche, mid ka mid ah suxuunta caadiga ah ee gobolka Amazon
Haddii aad booqato Ecuador ama Peru waxaad ogaan doontaa in saxankan la xusay oo lagu arkay makhaayadaha, oo ay ku jiraan dadka ku nool aagga Amazon. Saxanka ayaa ka kooban kalluun ceyriin oo lagu daadiyey liin iyo dhir udgoon. Waa wax fudud oo ceviche waxaa badanaa lagu qaataa saladh ama jajab moos ah. Dadka intiisa badani waxaa laga yaabaa inay aad u jecel yihiin saxankan kalluunka ama laga yaabo inayna jeclayn gabi ahaanba.
Suri palma grubs, cuntada caadiga ah ee gobolka Amazon
Haddii aad rabto inaad cunto wax ka duwan waxa kaliya ee aad fiirineysaa ulaha lagu leexiyay hilibka loo yaqaan suri palma grubs. Waxay yihiin dirxiga geedka madow ee bahalka - Rhynchophorus palmarum - iyagu waa cunno macaan.
La jimicsiga ama maxaa isku mid ah, cunista cayayaanka waa fikrad la soo jeediyey si looga caawiyo dhibaatooyinka gaajada adduunka iyo in la xaddido xaalufka iyo xaalufinta deegaanka ee xoolo badan. Cayayaanka ayaa ku yar dufanka, waxay ku badan yihiin borotiinka, waxayna u koraan si dhakhso leh waxayna tarmaan xitaa dhakhso badan Way ku jaban yihiin inay iibsadaan oo ay dayactiraan waxayna u baahan yihiin ilo yar si ay u noolaadaan.
Haddii aad geesi ku tahay inaad jebiso dhibaatooyinkaaga quudinta ee cayayaanka waad tijaabin kartaa… dadka ku nool gobolladaan waxay kuu sheegi doonaan inay macaan tahay. Way jecel yihiin.
Hilib dubista reer Brazil
Haddii aad ku jirto Amazon-ka Baraasiil sida Manaus ama Santarém, waa inaad ogaataa inaadan seegi karin hilibka dubista reer Brazil. Cuntada cuntooyinkan caadiga ah ee aagga Amazon waxaa ka mid ah hilibka doofaarka la dubay, hilibka lo'da ama digaagga. Caadi ahaan waxaa loogu adeegi karaa on skewers iyo dadka aad u jecel inay u cunaan sidan. Marka lagu daro in laga adeegto makhaayadaha caadiga ah iyo guryaha hilibka, waxaa jira qaab gaar ah oo ay booqdayaashu jecel yihiin. Badanaa waxaa jira lacag go'an oo go'an oo horey loo sii siiyay makhaayadaha makhaayadaha si ay kuu siiyaan qallooca hilibka kala duwan si aad u tijaabiso dhammaantood.
Mid ka mid ah suxuunta caadiga ah ee gobolka Amazon waa kalluunka Gamitana, oo lagu garto cabirkiisa ballaaran iyo Badanaa waa kalluun ay dadka gobolku aad u jecel yihiin. Caadi ahaan waxay ka dhigaan mid cufan oo waxaa lagu diyaariyaa fuud leh basal ay sidoo kale ka mid yihiin: toonta, paprika, midabaynta, miro, caleen baay, subag iyo waliba suugada madow ee lagu daro dhadhanka.
Waxaa lagu qasi jiray bariis, khudaar, digaag, saytuun, hilib, tuna iyo koryander. Ugu dambeyntii, waxaa lagu buuxiyaa gamitana waxaana loogu adeegaa patacones, yucca iyo chili. Waa saxan aad u xoog badan oo qofkasta oo isku dayaa uu jeclaado.
Cuntada ugu caansan
Gobolkan iyo mahadnaqida joogitaanka hawdka, waaxda Amazonas, miraha qalaad waxay u muuqdaan kuwo badan, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu sameeyo casiir, casiir, macmacaan iyo kareemo aad u fiican oo dhadhan fiican leh.
Cuntooyinka ay dadka halkaas ku nool iyo waliba dalxiisayaashu aad u doortaan waxaa ka mid ah muuska, yucca iyo kalluunka. Kalluunka waxaa loo isticmaalaa suxuuno badan oo kala duwan sida gamitana cufan, feeraha gamitana, kubadaha pirarucú iyo tarpon la dubay, iyo kuwo kale. Cunnooyinka aad ka heli karto maqaayadaha iyo haddii aad rabto inaad jikadaada ka sameysid si aad isugu daydo macaankeeda waxaad ka raadin kartaa qashinka internetka si aad ugu sameyso guriga, in kasta oo ay adag tahay in la helo taabashada gaarka ah ee ay ku bixiyaan qaybtaan. adduunka.
Ugu dambeyntiina, mid kale oo ka mid ah suxuunta caadiga ah ee gobolka Amazon ee inta badan la cuno waa hilib iyo hilibka ciyaarta waa tusaale ku jira caloosha caloosha qaybtan adduunka ka mid ah. Hilibka guryaha ayaa si weyn looga ganacsadaa aaggan adduunka ka mid ah wuxuuna dhaqaajiyaa lacag aad u tiro badan sanadkiiba. Gobolka Tahuayo ee Peru, waxay u muuqdaan inay ugaarsadaan wax badan waana xayawaan suuqa la geeyo si dadku u cunaan. Ugaadhsiga ayaa khatar weyn ku ah xayawaanka iyo dadaalada lagu ilaalinayo xayawaanka iyo Amazon iyo adduunka oo dhan.
Xayawaan badan ayaa qatar ugu jira dabargoyn ugaadhsiga iyo ka ganacsiga hilibka duurka. Ku daanyeer dhogor iyo dhogor kale Waxay tusaale cad u yihiin halista ugaarsiga. Xayawaan badan ayaa u hanjabaya qatarta ugaarsiga iyo ka faa'iideysiga xad dhaafka ah sababtoo ah luminta deegaanka.
Waxa aad hadda akhriday waa qaar ka mid ah suxuunta caadiga ah ee gobolka Amazon iyo waliba cuntooyinka inta badan la cuno oo dadku aad u jecel yihiin inta badan. Weligaa ma tagtay aagga Amazon oo nasiib ayaad u yeelatay inaad tijaabiso cuntada caadiga ah ee gobolka Amazon ee ay ku bixiyaan mahadnaq weyn oo caloosha ah? Noo sheeg cuntooyinka aad ugu jeceshahay iyo kuwa aadan jeclayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Amazon
by faner waxaan kaa codsanayaa inaad muujiso sawirada cuntada, meelaha ay tolayaan iyo sida loo sameeyo
Ku jawaab CIELO JIMENEX
Kolombiya-ka Kolombiya waxay leedahay waxyaabo badan oo ay muujiso, hantidiisa gastronomic-ka waa inay ku hodansan tahay sawirro innagu soo dhowaanaya. Hambalyo
Waxaan rabaa cuntada iyo macmacaanka, ma ahan kuwa ka yimid Kolombiya, ama faallooyinkaaga, ash
Ku jawaab emma
Waa inay dhigaan cuntada sida loo kariyo suxuunta caadiga ah ee Amazon maxaa yeelay ma jiro
Ku jawaab himelda
dhig cuntooyin badan oo ka mid ah suxuunta Amazon
Valentina olivros ramirez dijo
Aad baan uga helay, mahadsanid, waxay ahayd mid fudud oo toos ah
Ku jawaab valentina oliveros ramirez
MA HELI KARO XANUUN BOGAN, MA JIRO DA-MIIR.
JADWALKA GUUD dijo
noooo tani waa acco waxtar nooma lihid masss bn ka bax boggan laakiin hadaad sii fiicnaato kkoloquen algoooo GOOD !!
Jawaab GERAL BEADLES
CEEBTAAS PAGINAA !!
SAMEE WAX SOO SAAR AH
WAXBA LAMA HELO MAQAAL MID KII U BAAQAAYO Q FKAKAYGA AYAAN DARYEELAA
KHASHADA KALE EE KHALADAN
AHH IYO WAAN JECLAHAY SIXIRKA OZ
Jawaab NANI OZ
boqorka veronica dijo
Waxaan ahay caajis inaan akhriyo tan, shaqo qaado Bagos, aabbahay wuxuu leeyahay makhaayado buuxa oo uma baahni kuwan nacasnimada ah
Ku jawaab veronica rey
tani waa inay toosnaataa
Ku jawaab lina
Haye, haa, ma sameyn karo.
Ku jawaab andrehitha
dooxada sumurud caato ah dijo
Fadlan iga caawi qaabka cuntada sida macaan ee Vaupes
Jawaab Esmeralda Valle Delgado
Fadlan, waa inaan cusbooneysiinno waxa ku qoran bogga, maalmahan waxaa jira noocyo kala duwan oo cunto caadi ah oo keliya ma ahan leticia, laakiin waaxda oo dhan… ..
Jawaab JOSE ALVARADO
Liiska aad xustay mooyee, waxaan haynaa mojojoy cufan, yuca masato, casabe dhamaan soojeedinteeda, kalluunka kalderada, kahadlida kaluunka waxaan haysanaa dorado, pirarucu, palometa, carahuazu, sabalo, bocachico , sabaleta, iwm ...
Miraha qalaad sida: copoazu, arasa, camu camu, asai, chontaduro, milpesos, canab duurjoog ah, guama, iwm ……
Waxaan raadinayaa waa suxuunta caadiga ah ee gobolka Amazon
Jawaab Nicol Yuliana
miir keysy dijo
Jawaab ugu dir mayis keisy
Hagaag, macluumaadku wuu ila fiicnaaday laakiin waa inay inbadan gobolkan ka dhigaan sida waaxaha ka dhigaya goobta inbadan laakiin mahadsanid suxuunta caadiga ah ee ay wax badan iiga adeegeen ... mahadsanid
Ku jawaab isabella
Ma aanan u adeegin waxba, maxaa qashin ah
Ku jawaab marsela
Boggan aad ayuu ufiican yahay, laakiin cuntooyinkaas noooooooooooooooooooooooooooo ……. hahahahahahaha ……………………………… nacasyo
HADDII NOOCYADA NOOCYADA LA QORO LAAKIIN QAABKA LAGA QAADO, WAA MAXAAN KU AMARAY QASHINKA IYO QAADASHADA IN AAN U ARAGO XUN.
Ku jawaab tatiana
LAAKIIN WAAN HELAY A 5 NEBIGII HORAA AYUU DIB U EEGAY GRAXIAS
Waxaan u maleynayay inay ka hadlayaan caloosha caloosha ee gobolka Amazon waxaana jira waaxyo yar
Ku soo jawaab Fabian Cabrera
Queerkaan waxba ma haysto, waa inay midho badan ka saaraan nacaska
Wax badan ayaa ka dhiman gwvon boggan waxaan u sheegayaa qof walba inuusan ku lumin waqti boggan
Ku jawaab pochito
Cxoisas-kani waa kuwo waxtar badan u leh howlaha
Ku jawaab angelina
Maxay u dhigi la’yihiin sida saxankan gastronomic-ka loo sameeyo, taasi waa, sharaxaadda sida loo sameeyay ...
Rodrigo Amariles Bentacur dijo
Maxay u cabirayaan sida saxankaas loo kariyey?
Jawaab ku saabsan rodriga amariles bentacur
Iyagu ma siinayaan cuntada sida foojignaanta leh ... Waxaan u maleynayaa in Colombia aysan waligeed noqon doonin meel loo maro gastronomic, maxaa yeelay Venezuela ayaa ka faa'iideysaneysa
waxba maan helin
wixii aan raadinayey
Ku jawaab dan
Waad mahadsan tahay, wax badan ayey ii adeegtaa
Ku jawaab eliza
muxuu yahay muuqaal qurxoon
Dhammaan waan wada tagayaa marka hore
amazonku waa fiican yahay
Jawaab adriana valderrama
Waa inay waxbadan ka daabacaan Amazon oo aad uga yar
Ku jawaab jeffersson gil
amozonas waa mid aad u fiican
Ku jawaab leydy
riix Valentina Spain Hernández dijo
WAA RUN WAXAAD TAHAY
Jawaab si aad u gujiso Valentina España Hernández
aad baad u mahadsantahay runtii!
Ku jawaab juan jose